ट्याब्लेट कम्प्युटर प्रयोग गर्ने शायद सबैलाई, सफ्टवेयर को एक वा अन्य असफल संग सामना गर्नुपरेको थियो। जबकि अन्य यस्ता कारखाना सेटिङहरूमा पूर्ण रिसेट बढी आमूल उपाय, आवश्यक केही, कार्यक्रम वा "बजार" बाट खेल सरल reinstallation हल गर्न सकिएन। यदि मदत थिएन, त्यहाँ कम्प्युटर मार्फत "एन्ड्रोइड" फ्ल्यास गर्ने बारे एउटा प्रश्न छ। त्यहाँ धेरै आधारभूत विधिहरू छन्। तिनीहरूलाई हामी यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
यस मामला मा पहिलो चरण उपयुक्त फर्मवेयर उहाँलाई लागि खोज छ। कुनै चिह्नों छ जो "एन्ड्रोइड" चिनियाँ, फ्लैश कसरी र मोडेल अव्यावहारिक छ निर्धारण बारेमा प्रश्न छ भने, त्यसपछि तपाईं बस अलग लिन र प्रोसेसर र अन्य मोड्युलको प्रकारको बोर्ड स्थापना छन् के देख्न सक्छौं। अक्सर, यी पाटी AllWinner वा RockChip प्रोसेसर र परस्पर तिनीहरूलाई लागि फर्मवेयर मा गर्छन्। अन्य अवस्थामा यो शरीर मा आफ्नो मोडेल नम्बर, वा खुला छ भने, यन्त्रको मेनु हेर्न आवश्यक छ।
सबै को पहिलो निर्माता को आधिकारिक वेबसाइटमा फर्मवेयर जाँच गर्नुहोस्। यो छैन भने, त्यसपछि मात्र विषयमा ठूलो विषयगत फोरम जानुहोस्। किनभने उनीहरू खराब सफ्टवेयर समावेश गर्न सक्छ कुनै मामला मा, संदिग्ध फाइलहरू डाउनलोड छैन। हामी फर्मवेयर पाउन? बधाई छ, तपाईंको आफ्नै "एन्ड्रोइड" reflash कसरी निर्णय मा पहिलो चरण बनेको छ!
कम्प्युटर मार्फत वा बिना - कसरी फ्लैश गर्न?
व्यक्तिगत कम्प्युटर वा निर्मित ट्याब्लेट सफ्टवेयर मार्फत प्रयोग - त्यहाँ दुई फर्मवेयर संस्करण हो। पहिलो मामला मा पछि छलफल गरिनेछ जो पीसी, तयार गर्न आवश्यक छ।
दोस्रो मामला बताउँछन् ट्याब्लेट "एन्ड्रोइड" कसरी reflash गर्न एक कम्प्युटर प्रयोग बिना आफ्नै। यो गर्न, फर्मवेयर यसको आफ्नै ट्याब्लेट को प्रयोग को लागि अभिप्रेरित छवि छ, र मेमोरी कार्ड, त्यसपछि ग्याजेट जडान जो मा लोड छ जो संग्रह, डाउनलोड छ। जब तपाईं एक निश्चित कुञ्जी संयोजन थिच्नुहोस् (यो सामान्यतया फर्मवेयर गर्न निर्देशन मा निर्दिष्ट गरिएको छ) एक विशेष सेवा मेनु, मास्टर "rekaveri" भनिएको छ जो तपाईं हुनेछ।
यसबाहेक, एउटै बयान अनुसार, कार्ड मा फर्मवेयर फाइल चयन गर्नुहोस् र स्थापना पुष्टि गर्नुहोस्। यी कदम निम्न को फलस्वरूप, तपाईं समस्या मात्र सफ्टवेयर छ भने, एक काम ट्याब्लेट छ। अक्सर, यो देखि सबै डाटा हटाइएका छन्।
फर्मवेयर लागि आफ्नो कम्प्युटर तयार
यदि ट्याब्लेट सक्रिय छैन सबै, वा "rekaveri" को लागि फर्मवेयर छैन, यो व्यक्तिगत कम्प्युटरको सिलना गर्न सकिन्छ। यस मामला मा यो फर्मवेयर नै डाउनलोड गर्न मात्र होइन, तर आवश्यक छ पनि चालक र कार्यक्रम-flasher।
पहिलो डाउनलोड र आफ्नो कम्प्युटर प्लेट पहिचान गर्न र उहाँलाई काम गर्न अनुमति दिन्छ कि चालक स्थापित। यी कार्यक्रम बिना कम्प्युटर वा ल्यापटप सिर्फ ग्याजेट, तदनुसार, फर्मवेयर असफल हुनेछ हेर्न र हुनेछ।
कम्प्युटर मार्फत "एन्ड्रोइड" फ्ल्यास गर्न कसरी मुद्दा हल गर्न अर्को चरण, कार्यक्रम को लागि एक सेटिङ छ ट्याब्लेट फर्मवेयर। ठ्याक्कै मामला मा हुनु आवश्यक छ के, अनलाइन वा निर्माता देखि निर्देशनहरू पाउन सकिन्छ। यो कार्यक्रम "rekaveri" अघिल्लो संस्करणमा प्रदर्शन गर्दै छन् कि कार्यहरु कार्य हो।
यो फर्मवेयर छवि काम गर्छ र सही ढंगले ग्याजेटको स्मृति यसको ब्लक रजस्टर। यसलाई सही हार्डवेयर र ट्याब्लेट संग कुनै समस्या, फर्मवेयर को अन्त मा फेला पार्न भने यसलाई सक्रिय र सञ्चालन हुनेछ। यदि समस्या यथावत् छ, त्यसपछि यो फर्मवेयर सम्बन्धित छैन, र सेवा केन्द्रमा एक पदयात्रा छैन बचा गर्न सकिन्छ।
कहीं फर्मवेयर के पाउन भने?
तर के तपाईं पहिले नै कसरी थाहा छ भने कम्प्युटर मार्फत "एन्ड्रोइड" फ्ल्यास गर्न, तर तपाईं कहीं पनि आफ्नो मोडेल फर्मवेयर वा सफ्टवेयर-flasher लागि उपयुक्त पाउन सक्दैन? त्यसपछि दुई विकल्प छन्।
तपाईं के चाहनुहुन्छ प्राप्त गर्न जहाँ तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ जहाँ एउटै विषयगत फोरम, सबै मा मदत माग्न सक्छौं। सायद आफ्नो उपकरण फर्मवेयर विभिन्न मोडेल अनुरूप, र तपाईँले प्रतिस्थापन को संभावना देखाउन लागि। यदि यो मदत गर्दैन, तपाईं दोस्रो विकल्प, दुर्भाग्य, सधैं काम गर्दैन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
उहाँले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत वा फोन गरेर निर्माता बताइरहेका छ। केही निर्माता आफ्नो उपकरण को खरीदारों मूल्यांकन गर्छौं। र मदत खुसी गर्न समस्या समाधान। अरूलाई एक अधिकृत सेवा केन्द्र र अन्य तरिका एक यात्रा आवश्यक हुनेछ, दुर्भाग्य, भेटिएन गरिनेछ। कुनै पनि मामला मा, निर्माता शो तपाईं उहाँले तपाईं र तपाईंको ज्ञान पक्कै थियो कि, ट्याब्लेट आफ्नै "एन्ड्रोइड" कसरी reflash थाहा छ कि को प्रतिनिधिलाई एक साक्षात्कार मा।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, विशेष ग्याजेटहरू, र ट्याब्लेटको को एक किसिम चमकता, यो यो देखिन्छ रूपमा गाह्रो छ। प्रायजसो, त्यहाँ तपाईँले गर्न मद्दत गर्न खास निर्देशनहरू छन्। तपाईं अझै पनि कम्प्युटर मार्फत "एन्ड्रोइड" फ्ल्यास कसरी बुझ्न भने, हामी परीक्षण गर्न, र हालै गल्ति मरम्मत को लागत छैन वृद्धि गर्न ताकि सेवा केन्द्रमा सम्पर्क सबै सुझाव दिन्छौं।
विस्तृत निर्देशन र समान कार्यक्रम सूची: डेइमन उपकरण छवि कसरी माउन्ट
शुरुआती लागि निर्देशन: को "Photoshop" मा "पुरानो कागज"
कसरी मोजिला फायरफक्स देखि Webalta हटाउन: शुरुआती लागि निर्देश
"Crumpled कागज" को एक प्रभाव फोटो कसरी दिन
जहाँ कथा स्काइप राखिएको छ थाहा नगर्ने ती लागि लेख
आवाज Changer, अन्य व्यक्ति को समय मा Tarry
Litsa EFI 2: * होटल विवरण र ग्राहक समीक्षा
"Coronal": प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ, समीक्षा। दबाइ analogues
मूर्तिपूजक पुरातन Slavs amulets। पुरातन Slavs Amulets: मूल्य
प्राचीन ग्रीस मा जो शिक्षकहरू भनिन्छ? प्राचीन ग्रीस मा शिक्षक को कर्तव्य
के अवधि मा सुरु पेट बढ्दै?
सपना व्याख्या: घोडाहरू को के झुण्ड सपना?